Dhibaatooyinka goynta ayaa laga ogaadaa Apple Fitness + markaad ka shaqeyneyso Apple TV | Waxaan ka socdaa mac
Arrimaha ka-goynta waxaa laga ogaadey Apple Fitness + markaad ka shaqeyneyso Apple TV
Dad badan ayaa u adeegsada Apple Watch, ma aha oo kaliya qalab daryeel caafimaadkeena iyo kormeeraya joogteena, laakiin sidoo kale u adeegsada (waxaan u adeegsanaa) qaab aan ku dhiirrigelinno nafteena marka aan tababbarayno. Apple Fitness + wuxuu ku dhashay fikradda fidinta iyo caawinta dhammaan dadkaas doonaya inay ku darsadaan dhaqamada caafimaadka qaba noloshooda. Si kastaba ha noqotee Joogtada ah dhibaatooyinka ka goynta Apple TV waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in la isticmaalo adeegga. Waxay u muuqataa in xalka uusan u dhowayn.
In kasta oo Apple Fitness + uusan ahayn adeeg hadda ka jira Spain, haddana adeegsadayaal badan ayaa horayba ugu raaxeystay dhibaatooyinka hadda jirana waxay sababi karaan dib u dhac ku darista dalal kale. Waxaa jira dhibaato aad u muhiim ah waxayna umuuqataa in Apple uusan xal u helin. The xiriirka ka dhexeeya Apple Watch iyo Apple Fitness + waa mid aad u deggan, si aad u badan oo aan u oggolaanaynin inay u socoto si caadi ah, iyadoo u rogeysa khibrada isticmaalkeeda cadaab.
Waxyaabo badan ayaa heli kara in la nadiifiyo dhibaatooyinka isku xirnaanta u dhexeeya aaladaha isticmaaleyaal badan ayaa ka fiirsanaya inay ka baxaan adeegga kuna noqo wadadii hore. Waa wax laga xishoodo maxaa yeelay yeelashada tababarayaal badan oo kala duwan oo leh hawlo badan oo kala duwan ayaa dhiirrigelin ah in la bilaabo ama la sii wado caadooyinka caafimaadka qaba. Dhibaatada ugu weyn, ee kor ku xusan, waxay u egtahay in xalka uusan aad ugu dhowaan.
Waa wax iska caadi ah in la akhriyo dib u eegista isticmaalaha ee sheeganaya in inta lagu jiro tababarka, Apple TV uu lumiyo xiriirkeyga Apple Watch iyada oo aan ogeysiis hore la helin. Markaad go'do, Apple Fitness + kumuu oggolaanayso inaad dhammayso tababarka ama aad dib uhesho saacadda. Halkii, qalad uun bay sameysaa oo wey dhamaataa iyadoo aan sharaxaad dheeri ah laga bixin.
Isticmaalaha Andrew O'hara waxay bilaabeen sahan barta Twitter-ka si loo ogaado in dhibaatadani tahay mid gaar ah ama lagu farageliyay nolosha dadka isticmaala kale. Natiijooyinka ayaa dhibsaday waxayna umuuqataa in dhibaatooyinkan ay aad u badan yihiin.
Tani caadi maahan #AppleFitnessPlus. Isticmaalayaashu ma dhegi doonaan haddii ay tani sii socoto oo ay bixiso wax hab ah oo dib loogu xiro saacadda, dhammeynta, ama jimicsiga horay loo sii wado. Waxaan maqlay dad badan oo kale oo ka cabanaya arrintan. Maaha wax aan caadi ahayn. pic.twitter.com/fKpyLgJa3O
- Andrew O'Hara (@Andrew_OSU) February 3, 2021
Halkaas waxaa suurtagal ka noqotay in la gaaro Apple's forumyada wada hadalka, halkaas oo inbadan oo isticmaaleyaal ahi ay si faahfaahsan uga tagayaan dhibaatooyinka isku xirka ka dhexeeya Apple Wach iyo Apple Tv + marka ay socdaan Apple Fitness. Inaad sameyso jimicsi saacad soconaya iyo maxaa wuu baxayaa tobankii daqiiqaba, waa waali. Dhamaadka waad joojineysaa inaad sameyso.
Waxaad moodaa inay jaan go'an tahay kala goynta
Fagaarahan dooda waxay soo jeediyeen xoogaa xalal macquul ah. Qaarkood waxay ku saleysan yihiin mabda'a guud ee ah, "Haddii aadan aqoon, dib u bilow" labada TV-ga Apple iyo barnaamijyada lagama maarmaanka ah. Xalalka kale waxay maraan iyagoo leh fikrado geesinimo iyo asal ah, sida midka soo jeedinaya in TV-ga Apple laga wareejiyo qolka si looga fogaado faragalinta suuragalka ah. Xal aan la dooran maxaa yeelay waa inaan doortaa meesha aan dhigo aaladda, ma ahan tan kale.
Muhiimadu waxay tahay sida goosgoosku u dhacaan, waxay umuuqataa inay jirto qaab qeexaya iyaga. Waxay u muuqataa inay tahay mid soo noqnoqota oo dhacda marka jimicsiga ugu horreeya ee maalinta la fuliyo. Fasallada dambe ma aysan la kulmin dhibaatooyinka. Hadda, yaa badanaa tababbara in ka badan hal jeer maalintii? Marka waa inaysan noqon xalka midkood inuu bilaabo tababar, joojiyo ka dibna uu bilaabo midka aan runtii doonayo inaan fuliyo.
Muhiimadu waxay tahay Uma muuqato in shirkadda Californian ay wax xal ah bixinayso, waana iyada oo aysan aqoonsaneyn dhibaatada, ugu yaraan hadda. Laakiin adeegsadayaal badan ayaa leh oo ku dhib qaba kala-goyntani maalin kasta waana in lagu xaliyaa sida ugu dhakhsaha badan. Qalabka Apple TV ma ahan mid raqiis ah, Apple Watch-ka ma ahan mid raqiis ah, Apple Fitness + rukumeysatana ma ahan Waxaan ula jeedaa marka aad adeegsanaysid adeeg, waa inuu u shaqeeyaa si caadi ah hadaad bixisona, waa inuu noqdaa mid ka badan dareeraha.
Waan sugi doonaa si aan u aragno haddii Apple ay aqoonsan tahay fashilka oo uu u dhaadhaco shaqada si uu u saxo. Waxaan si joogto ah kula socodsiin doonaa markasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Arrimaha ka-goynta waxaa laga ogaadey Apple Fitness + markaad ka shaqeyneyso Apple TV
Foxconn waxay ka sameyn kartaa gawaarida korontada Mareykanka gudaha 2023. Miyey kubiiri doontaa Apple Car?
Khariidadaha Siri iyo Apple waxay ku daraan Goobaha Tallaalka Mareykanka ee COVID-19